I-Primenie izaqathe emithi yokwelapha, izakhiwo eziwusizo zomkhiqizo - Izaqathe zezokwelapha - 2020
Ukupheka ekusebenziseni izaqathe emithi yokwelapha
Abantu abaningi babevame ukudla izaqathe kuphela ukudla, bengazi ukuthi izaqathe, ikakhulukazi amafutha karoti, Kuhle kakhulu ukusetshenziselwa ukwelashwa.
Izindawo zokwelapha izaqathe ezibandayo
Indlela yokusebenzisa izaqathe emakhazeni
Kanjani isanqante ewusizo izinkinga zesisu?
Indlela yokupheka izaqathe zokwelashwa kwesibindi
Ukusebenzisa izaqathe zokuchoboza amatshe ezinso
Izakhiwo eziwusizo amafutha karoti
Izifo zenhliziyo kanye neziqathe
Ukusebenzisa izaqathe zokwelapha izifo zamehlo
Izaqathe nesisindo sokulahleka, indlela yokusebenzisa izaqathe zokwehla kwesisindo
Ama-karoti avame ukutholakala ekuphekeni okulula. Lokhu kungenxa yezici eziningi.
Ama-karoti anamavithamini amaningi eqembu A. Njengoba wazi, lawa mavithamini asekela isikhumba esimweni esiphelele. Vumelana ukuthi ukulahlekelwa isisindo iqiniso elibalulekile (ngokulahlekelwa isisindo, isikhumba sishiya ukuqina kwayo). Futhi ngokuhambisana ne-vitamin E, lo mkhiqizo uyakwazi ukukhokhisa umzimba ngamandla ngamandla isikhathi eside.
Naphezu kwekhalori ephansi, izaqathe pretty sweet. Lena yindlela ephelele yokukopela ukunambitheka kokunambitheka, ngoba lapho ulahlekelwa isisindo ufuna amnandi kakhulu.
Ukuphikisana okuyinhloko ngokuthwala izaqathe njengomkhiqizo wokudla kungukuba khona kwe-fiber ekubunjweni kwayo. Izaqathe zingashesha kakhulu ukuthola okwanele kunezinye izimila.
Umbala ogcwele okwesibhakabhaka of izaqathe uvumela ukugqumisa ngisho nesidlo sokudla esingathandeki kakhulu.
Uyazi? Nakuba izondlo zaseNtshonalanga kanye ne-gastroenterologists zikhuluma ngezwi elilodwa mayelana nezinzuzo zokudla izaqathe ngesikhathi sokudla, izincwadi zasekhaya "ziyamemeza" ngezingozi zayo.
Khumbula: uma uthola uketshezi, izaqathe kumele zikhishwe ekudleni.
Ukwelapha i-carrot nokusetshenziswa kwayo kwe-prophylaxis emakhazeni kuyindlela eyaziwa kubagogo bethu. Ama-antioxidants athola izaqathe asiza ukucubungula imikhiqizo yomzimba. IJerrot juice inophilisa izakhiwo ukuze kunciphise ukucasuka emqaleni. Ngenxa yalokhu, ijusi isanqante esiphundu lixubene nesipuni esisodwa soju futhi sithathwe izikhathi ezine ngosuku.
Ukwenza ngcono ukuzivikela Ama-saladi ayenziwa ngama-izaqathe ahle kakhulu, asekelwe izaqathe ezivuthiweyo, amafutha omnqumo namajoni kalamula. Ukuze ukwelaphe ukukhwehlela, ungalungisa ingxube yejuti esisha nesibisi ku-1: 1 isilinganiso.
Uyazi?Lapho kugcwaliseka umbala wezinqathe, umuthi ocebile we-phytoncides juice.
Ngokuvamile, i-carrot juice emakhazeni avamile asetshenziswa abantu abavame ukwelashwa, abesifazane abakhulelwe nabantwana abancane. I-carrot juice iqukethe inani elikhulu le-phytoncides (i-agent enamandla yama-anti-virus kanye ne-antimicrobial agent). Ukuze ukwelashwa i-rhinitis, ijusi elilodwa kuphela le-carrot lisebenza kahle. Ijusi lonyaka odlule kungcono ukungasebenzisi. Okokuqala ugeze impumu ngamanzi afudumele nosawoti olwandle. Ijusi le-carrot elingenalutho lifakwe emakhaleni ngalinye ngama-3-4 amaconsi abantu abadala kanye namaconsi amabili ezinganeni.
Kubalulekile!Sebenzisa ijusijusi njengendlela yokubandayo kungabi ngaphezu kweviki elilodwa.
I-Carotene iyisici esibaluleke kakhulu samaqathi, kusiza ukusheshisa umzimba. Kodwa ukuze i-carotene igxilwe ngokuphelele umzimba, izaqathe zidinga ukudliwa kanye namafutha omquba.
I-carrot juice i-antioxidant enhle kakhulu. Kunconywa ukuba uphuze ngokuqotshwa 500 ml esiswini esingenalutho. IJarrot juice ingasetshenziselwa isisu somzimba. Ngandlela-thile, ibhotela le-krotru ilungile lokhu.
Njengoba i-laxative enhle, imbewu yesanqante, eyaziwa kakhulu emithi yomuthi, isetshenziswa kabanzi. Ukuze basebenzise, ​​baqale bathululelwe ngamanzi abilayo ihora elilodwa, bese badliwa, bahlafuna kahle futhi baphuza ingilazi yamanzi.
Njalo isiguli sesihlanu sibona udokotela nezinkinga zesibindi. Yiqiniso, izaqathe azikho ezinamandla zokwelapha lesi sifo ngaphandle kwemithi eyengeziwe, noma kunjalo, iyakwazi ukuletha usizo. Ukuze kuvikelwe izifo zesibindi esetshenziswa i-decoction of izaqathe. Ngokuvamile, ukuhlanza isibindi usebenzisa ijusi noma izaqathe ezigayiwe ku-grater enhle. Thatha izaqathe zokwelapha isibindi izikhathi ezintathu ukugqoka, ihora elilodwa ngaphambi kokudla. Ingxube yesanqante ne-beet juice (ratio 1: 1) iyoba kuhle kakhulu kwesibindi.
Kubalulekile! Uma unquma ukusebenzisa izaqathe zokwelapha isibindi noma ukuvimbela izifo, kubalulekile ukukhipha izaqathe ekudleni bese uthatha kuphela ngezinhloso zokwelapha. Lapho i-carotene yesibindi esonakaliswe kahle.
Sekuyisikhathi eside izaqathe zisetshenziselwa isifo sezinso, kusukela ekubukeni nasekususweni kwezinso zezinso. Kungcono ukusebenzisa imbewu isanqante, kodwa kuyokwenza kahle ngamafutha ochotshozayo namaqrotro, kodwa lapha kufanele uqaphele futhi wazi ukuthi ungayithatha kanjani. Okusebenza kahle ingxube ye-parsley impande yomshukela kanye nejoloti juice, okungafanele ithathwe ngaphezu kuka-500 ml ngosuku.
IJerrot juice isetshenziselwa i-cystitis.Kulokhu, isanqante yenza enye yemisebenzi yayo eyinhloko - ama-antioxidants ahlakaza amatshe, futhi i-carotene "igxuma" ukuvuvukala. Futhi i-carrot ithinta ukwakheka kwebhili kanye ne-biliary excretion.
Futhi izaqathe unomthelela oqinile wokudida, okuyinto eyenza ukuqedwa ngokushesha kwezinto ezinobuthi emzimbeni.
Kubalulekile! Ngokusebenzisa ngokweqile izaqathe, "i-carrot jaundice" ingase ibonakale, imbangela yayo ukususwa kwe-nitrate emzimbeni.
Amafutha e-carrot atholakale esebenzisa ama-willows e-cosmetology. Yenziwe kusuka kumbewu. Isetshenziselwa ukuvimbela ukuguga kwesikhumba kanye nezwi, ukuphatha imivimbo, i-psoriasis ne-eczema. Amafutha we-carrot kunconywa ukuba asebenzise ukuze avikele isikhumba emisebeni ye-UV futhi athuthukise ukuthungula. Uma unenkinga yezinwele, sebenzisa amafutha krotikthi ukuthuthukisa izinwele zokukhula nokusheshisa ukujikeleza kwegazi.
I-orotiroti inomphumela omuhle hhayi kuphela esikhumbeni, kodwa futhi kuwo wonke umzimba wonke: kuyasiza ukwandisa ithoni lesifuba, kuthuthukisa imithi yokuzivikela, kuyasebenza ekwelapheni nasekuvimbeleni umkhuhlane kanye nezifo ezithathelwanayo zokuphefumula, kusiza ukuqeda ubuhlungu obuhlangene e-arthritis.
Izaqathe - igumbi lokugcina lamavithamini elithinta umsebenzi wenhliziyo. Amavithamini amaqembu A, B, E, kanye ne-potassium, i-sodium ne-calcium iyasiza ekwenzeni ngcono izifo zenhliziyo. Izinkinga zenhliziyo, Kunconywa ukuthi usebenzise isanqante tincture.
Uyazi? UHippocrates uthe imithi kufanele isetshenziswe njengokudla, nokudla - njengemithi.
I-Carotene ithole ngobuningi emifino uzwa imisipha yenhliziyo kahle futhi ahlanze imishanguzo yegazi. Uma umfutho wegazi ophakeme usuphumelele kakhulu ijusi kusuka ku izaqathe, ama-radishes nama-beet okungeziwe nge-lemon ujusi noju. Umxube ulungiselelwe ku-ware ehlanganisiwe. Amajuji ayengezwa ngamunye, ewavuselela ngesipuni sokhuni.
Ngesikhathi siseyingane sasivame ukuzwa ukuthi udinga ukudla amaqathi amaningi ukuze ubone umbono omuhle. Futhi lokhu kuyiqiniso. Ephakathi, ama-karoti ayebhekwa njengendlela yokwelapha kuphela izinkinga zombono. Ama-karoti acebile ku-beta-carotene kanye ne-carotenoids, elandela ukuguqulwa ibe i-vitamin A, ngokuntuleka kombono okuwohloka. I-Vitamin A nayo i-antidote enamandla yokwelapha. Ngaphezu kwalokho, isanqante iqukethe i-lutein, eqinisa ukujula kwe-pigmentation ku-macula, ingxenye ephakathi kwe-retina.
Njengoba ubona I-carrot ayiyona nje imifino "ye-salad-borsch", kodwa futhi imithi emihle kakhulu. Noma kunjalo, ungakhohlwa ukubonisana nodokotela ngaphambi kokusebenzisa izaqathe ngezinhloso zokwelapha.
Khumbula lokho ukusetshenziswa ngokweqile kwamaqathe kungaholela ku-hypervitaminosis.